သင့် Hard Disk Drive မကြာခင်ပျက်စီးတော့မယ်ဆိုတာသိနိုင်မယ့်အချက် ၄ချက်
သင့် Hard Disk Drive မကြာခင်ပျက်စီးတော့မယ်ဆိုတာသိနိုင်မယ့်အချက် ၄ ချက်
21 Aug 2018 . 5:32 PM
ကျနော်တို့မကြာခဏ မြင်နေရတယ်။ ကြားနေရတယ်။ “Hard Disk ၊ Hard Disk ၊ မင်း Hard Disk ၊ ငါ့ Hard Disk …. ” အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ရုပ်ရှင်တွေပဲ တဝကြီးကူးကူး ၊ Software နဲ့ Game တွေ Video မှတ်တမ်းနဲ့ သီချင်းတွေပဲသိမ်းသိမ်း Data တွေကြီးကြီးမားမားနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ IT သမားတွေ၊ Video Editor နဲ့ Photographer တွေကြားမှာမရှိမဖြစ်အသုံးပြုနေရတဲ့ (တသသကိုင်နေတယ်ဆိုပိုမှန်မယ်ထင်ပါတယ်) Storage Device တစ်ခုပါပဲ။ မရှိမဖြစ်သုံးနေရတဲ့ ပစ္စည်းတွေက နည်းနည်းတော့ နုတယ်ပဲပြောရမလား… မကြာခဏဆိုသလို “Hard Disk လစ်သွားပြန်ပြီဟေ့ ၊ ငါ့ဟာလေးတွေကုန်ပါပြီ ၊ Project တွေတော့ ဂန့်ပြီ၊ ခွေးဖြစ်ပြီဟေ့” ဆိုတဲ့အသံလေးတွေ Facebook Post လေးတွေ မကြာခဏဆိုသလို ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့နေရ ကြားနေရပြန်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကြုံလာရင် Recover လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တောင် ရာနှုန်းပြည့်ပြန်ရဖို့နည်းသလို၊ တစ်ခါတစ်လေမှာ လုံးဝ ပြန်မရတော့တဲ့အထိ အဖြစ်တွေဆိုးသွားတတ်ကြပါတယ်။ Hard Disk Drive တွေဟာ အခန့်မသင့်လို့ ၊ Over Voltage ဖြစ်လို့ ရုတ်တရက်ပျက်သွားတာမျိုး ၊ Format မှားချမိတာမျိုးဆိုတာတွေရှိပေမယ့် ဒါက Human Error တွေဖြစ်လို့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကယ်စရာနည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ တယုတယနဲ့ အသုံးပြုနေပေမယ့် ပစ္စည်းသင်္ခါရ လူသင်္ခါရဆိုတဲ့ မမြဲသော တရားသဘောအရ အချိန်တန်ရင်ပျက်မှာပါ။ ပျက်မယ်ဆိုပေမယ့် ပျက်ခါနီးမှာ ဘယ်လို လက္ခဏာမျိုးလေးတွေပြတတ်တယ်ဆိုတာ သိထားရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေအတွက် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။
Hard Disk Drive တစ်လုံးရဲ့ပျမ်းမျှသက်တမ်း
Desktop PC တွေထဲမှာသုံးတဲ့ Internal Hard Disk Drive တွေရဲ့ပျမ်းမျှသက်တမ်းဟာ ၅ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်အတွင်းရှိပြီး External Hard Disk တွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းကတော့ ၃ နှစ်ကနေ ၅ နှစ်အတွင်းရှိပါတယ်။ ( Factory Fault နဲ့ Human တွေကြောင့်ဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ဝယ်ပြီး မနက်ဖြန်ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်)
Hard Disk Drive များပျက်ခါနီးဖြစ်ပေါ်တတ်သော လက္ခဏာ ၄ချက်
နံပါတ် ၁ အနေနဲ့အဖြစ်အများဆုံး လက္ခဏာကတော့ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရတာ လေးလံလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Window OS တစ်ခုလုံးဟာ Hard Disk Drive ပေါ်မှာ Run ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Hard Disk မကောင်းတော့တဲ့အခါမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ Read/Write Speed တွေမရရှိခြင်း ၊ File System များချို့ယွင်းခြင်း စတဲ့ပြဿနာတွေကနေအစပြုပြီး ကွန်ပျူတာဟာ အမှားအယွင်းမရှိ၊ အစစအရာရာပြည့်စုံနေပါလျက်နဲ့ စိတ်ပျက်လောက်အောင်လေးလံလာတာမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာဟာ အခုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင် သိမ်မကြာခင် Hard Disk လဲရဖို့သေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။
နံပါတ် ၂ အချက်ကတော့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိတဲ့ Files တွေ ဖွင့်လို့မရတော့တာမျိုး၊ ဖွင့်တဲ့အခါ လေးလံနေတာမျိုး၊ အမျိုးအစားသတ်မှတ်လို့မရတဲ့ Unknown File Format တွေအလိုလျောက်ဖြစ်သွားတာမျိုး။
အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း Hard Disk ပျက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
နံပါတ် ၃ အချက်ကတော့ ကျနော်တို့မကြာခဏမြင်ဖူးတတ်တဲ့ Error ပါ၊ Bad Sectors တွေများလာတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Bad Sector အကြောင်းကို အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါရစေ၊ Bad Sector မှာ လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ (Physical) “Hard” Bad Sector နဲ့ Program Error တွေ(Logical)ေ ကြာင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ “Soft” Bad Sector ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ ၂ မျိုးထဲကမှ လူသားတွေကိုင်တွယ်အသုံးပြုမှု၊ မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ ဖုန်နဲ့ဂျီးတွေကြောင့်ပျက်ဆီးမှုတွေက ပြန်ပြင်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ Program Error Code တွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ “Soft” Bad Sectors Error တွေကတော့ Software တွေနဲ့ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Bad Sectors တွေများနေတယ်၊ ပြန်ပြီး Fix လုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Hard Disk Drive အသစ်တစ်လုံးလဲဖို့စဉ်းစားထားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Bad Sectors တွေကို စစ်ဖို့ Bad Sectors Repair Tool Software တွေ အလွယ်တကူရှာယူနိုင်ပါတယ်။ Software မလိုပဲစစ်ချင်ရင်တော့ နည်းလမ်းကို ဒီနေရာမှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၄။ ။ အကယ်၍များသင့်ရဲ့ Hard Disk ကနေ “ကလစ်” “ကလစ်” ၊ “ဂျစ်ဂျစ်” “ဂျစ်ဂျစ်” ဆိုတဲ့ အသံလေးတွေကြားနေရပြီဆိုရင်တော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ သင့်ရဲ့ External Hard Disk Drive လေးပျက်ဖို့အရမ်းနီးနေပါပြီ။ လက်ရှိထည့်ထားတဲ့ Data တွေကို အသစ်တစ်ခုမှာ အမြန်ဆုံး Backup လုပ်ဖို့နဲ့ လက်ရှိ Data တွေကိုထပ်မထည့်ဖို့အကြုံပြုပါတယ်။
အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကတော့ ထင်သာမြင်သာရှိပြီး အလွယ်တကူခန့်မှန်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Akhayar-Tech ရဲ့ Fans တွေအနေနဲ့လည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ဘူးကြလား ? အဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့ရင်ရော ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြသလဲဆိုတာ Comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝင်ရောက်ကူညီအကြံပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင်တင်ဆက်နေသည့် စာမျက်နှာများတွင် အခရာမှတင်ဆက်ထားသည့် ဆောင်းပါးများ၊ သတင်းများကို ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရယူထားခြင်းမရှိဘဲ အခရာမီဒီယာမှတင်ဆက်နေသည့် အကြောင်းအရာများထဲမှ စာသားအချို့ကိုဖြစ်စေ ၊ အပုဒ်လိုက်ဖြစ်စေ ၊ တစ်ပိုဒ်ခြင်းဖြစ်စေ ကူးယူသုံးစွဲခြင်းမပြုရန်နှင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါက အများသိစေရန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
သငျ့ Hard Disk Drive မကွာခငျပကျြစီးတော့မယျဆိုတာသိနိုငျမယျ့အခကျြ ၄ခကျြ
ကနြျောတို့မကွာခဏ မွငျနရေတယျ။ ကွားနရေတယျ။ “Hard Disk ၊ Hard Disk ၊ မငျး Hard Disk ၊ ငါ့ Hard Disk …. ” အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။ ရုပျရှငျတှပေဲ တဝကွီးကူးကူး ၊ Software နဲ့ Game တှေ Video မှတျတမျးနဲ့ သီခငျြးတှပေဲသိမျးသိမျး Data တှကွေီးကွီးမားမားနဲ့အလုပျလုပျနတေဲ့ IT သမားတှေ၊ Video Editor နဲ့ Photographer တှကွေားမှာမရှိမဖွဈအသုံးပွုနရေတဲ့ (တသသကိုငျနတေယျဆိုပိုမှနျမယျထငျပါတယျ) Storage Device တဈခုပါပဲ။ မရှိမဖွဈသုံးနရေတဲ့ ပစ်စညျးတှကေ နညျးနညျးတော့ နုတယျပဲပွောရမလား… မကွာခဏဆိုသလို “Hard Disk လဈသှားပွနျပွီဟေ့ ၊ ငါ့ဟာလေးတှကေုနျပါပွီ ၊ Project တှတေော့ ဂနျ့ပွီ၊ ခှေးဖွဈပွီဟေ့” ဆိုတဲ့အသံလေးတှေ Facebook Post လေးတှေ မကွာခဏဆိုသလို ကနြျောတို့ပတျဝနျးကငျြမှာ မွငျတှနေ့ရေ ကွားနရေပွနျပါတယျ။
ဒီလိုဖွဈရပျဆိုးတှကွေုံလာရငျ Recover လုပျလို့ရတယျဆိုရငျတောငျ ရာနှုနျးပွညျ့ပွနျရဖို့နညျးသလို၊ တဈခါတဈလမှော လုံးဝ ပွနျမရတော့တဲ့အထိ အဖွဈတှဆေိုးသှားတတျကွပါတယျ။ Hard Disk Drive တှဟော အခနျ့မသငျ့လို့ ၊ Over Voltage ဖွဈလို့ ရုတျတရကျပကျြသှားတာမြိုး ၊ Format မှားခမြိတာမြိုးဆိုတာတှရှေိပမေယျ့ ဒါက Human Error တှဖွေဈလို့ ကိုယျ့အပွဈနဲ့ကိုယျဖွဈတဲ့အတှကျ ကယျစရာနညျးလမျးမရှိပါဘူး။ တယုတယနဲ့ အသုံးပွုနပေမေယျ့ ပစ်စညျးသင်ျခါရ လူသင်ျခါရဆိုတဲ့ မမွဲသော တရားသဘောအရ အခြိနျတနျရငျပကျြမှာပါ။ ပကျြမယျဆိုပမေယျ့ ပကျြခါနီးမှာ ဘယျလို လက်ခဏာမြိုးလေးတှပွေတတျတယျဆိုတာ သိထားရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ Data တှအေတှကျ အကောငျးဆုံးပွငျဆငျနိုငျမှာပါ။
Hard Disk Drive တဈလုံးရဲ့ပမျြးမြှသကျတမျး
Desktop PC တှထေဲမှာသုံးတဲ့ Internal Hard Disk Drive တှရေဲ့ပမျြးမြှသကျတမျးဟာ ၅ နှဈကနေ ၁၀ နှဈအတှငျးရှိပွီး External Hard Disk တှရေဲ့ ပမျြးမြှသကျတမျးကတော့ ၃ နှဈကနေ ၅ နှဈအတှငျးရှိပါတယျ။ ( Factory Fault နဲ့ Human တှကွေောငျ့ဆိုရငျတော့ ဒီနဝေ့ယျပွီး မနကျဖွနျပကျြသှားနိုငျပါတယျ)
Hard Disk Drive မြားပကျြခါနီးဖွဈပျေါတတျသော လက်ခဏာ ၄ခကျြ
နံပါတျ ၁ အနနေဲ့အဖွဈအမြားဆုံး လက်ခဏာကတော့ ကှနျပြူတာအသုံးပွုရတာ လေးလံလာခွငျးဖွဈပါတယျ။ Window OS တဈခုလုံးဟာ Hard Disk Drive ပျေါမှာ Run ထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ Hard Disk မကောငျးတော့တဲ့အခါမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ Read/Write Speed တှမေရရှိခွငျး ၊ File System မြားခြို့ယှငျးခွငျး စတဲ့ပွဿနာတှကေနအေစပွုပွီး ကှနျပြူတာဟာ အမှားအယှငျးမရှိ၊ အစစအရာရာပွညျ့စုံနပေါလကျြနဲ့ စိတျပကျြလောကျအောငျလေးလံလာတာမြိုးဖွဈလာတတျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ကှနျပြူတာဟာ အခုပွောတဲ့ပုံစံမြိုးဖွဈနပွေီဆိုရငျ သိမျမကွာခငျ Hard Disk လဲရဖို့သခြောသလောကျရှိနပေါပွီ။
နံပါတျ ၂ အခကျြကတော့ ကှနျပြူတာပျေါမှာရှိတဲ့ Files တှေ ဖှငျ့လို့မရတော့တာမြိုး၊ ဖှငျ့တဲ့အခါ လေးလံနတောမြိုး၊ အမြိုးအစားသတျမှတျလို့မရတဲ့ Unknown File Format တှအေလိုလြောကျဖွဈသှားတာမြိုး။
အဲ့လိုတှဖွေဈနတေတျတယျဆိုရငျလညျး Hard Disk ပကျြဖို့အကွောငျးဖနျလာတယျလို့ဆိုရမှာပါ။
နံပါတျ ၃ အခကျြကတော့ ကနြျောတို့မကွာခဏမွငျဖူးတတျတဲ့ Error ပါ၊ Bad Sectors တှမြေားလာတဲ့ပွဿနာဖွဈပါတယျ။ ဒီနရောမှာ Bad Sector အကွောငျးကို အနညျးငယျရှငျးပွပေးပါရစေ၊ Bad Sector မှာ လူသားတှကွေောငျ့ဖွဈတတျတဲ့ (Physical) “Hard” Bad Sector နဲ့ Program Error တှေ(Logical)ေ ကွာငျ့ဖွဈတတျတဲ့ “Soft” Bad Sector ဆိုပွီး ၂မြိုးရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီ့ ၂ မြိုးထဲကမှ လူသားတှကေိုငျတှယျအသုံးပွုမှု၊ မတျောတဆထိခိုကျမှု၊ ဖုနျနဲ့ဂြီးတှကွေောငျ့ပကျြဆီးမှုတှကေ ပွနျပွငျဖို့မလှယျကူပါဘူး။ Program Error Code တှကွေောငျ့ဖွဈတတျတဲ့ “Soft” Bad Sectors Error တှကေတော့ Software တှနေဲ့ပွနျပွငျလို့ရပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ကှနျပြူတာမှာ Bad Sectors တှမြေားနတေယျ၊ ပွနျပွီး Fix လုပျလို့လညျးမရတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ထုံးစံအတိုငျး Hard Disk Drive အသဈတဈလုံးလဲဖို့စဉျးစားထားရတော့မှာဖွဈပါတယျ။ Bad Sectors တှကေို စဈဖို့ Bad Sectors Repair Tool Software တှေ အလှယျတကူရှာယူနိုငျပါတယျ။ Software မလိုပဲစဈခငျြရငျတော့ နညျးလမျးကို ဒီနရောမှာဝငျကွညျ့နိုငျပါတယျ။
၄။ ။ အကယျ၍မြားသငျ့ရဲ့ Hard Disk ကနေ “ကလဈ” “ကလဈ” ၊ “ဂဈြဂဈြ” “ဂဈြဂဈြ” ဆိုတဲ့ အသံလေးတှကွေားနရေပွီဆိုရငျတော့ စိတျမကောငျးစရာပါပဲ။ သငျ့ရဲ့ External Hard Disk Drive လေးပကျြဖို့အရမျးနီးနပေါပွီ။ လကျရှိထညျ့ထားတဲ့ Data တှကေို အသဈတဈခုမှာ အမွနျဆုံး Backup လုပျဖို့နဲ့ လကျရှိ Data တှကေိုထပျမထညျ့ဖို့အကွုံပွုပါတယျ။
အခုဖျောပွခဲ့တဲ့အခကျြလေးတှကေတော့ ထငျသာမွငျသာရှိပွီး အလှယျတကူခနျ့မှနျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ Akhayar-Tech ရဲ့ Fans တှအေနနေဲ့လညျး ဒီလိုအဖွဈမြိုးလေးတှကွေုံတှဘေူ့းကွလား ? အဲ့လိုဖွဈလာခဲ့ရငျရော ဘယျလိုဖွရှေငျးကွသလဲဆိုတာ Comment မှာပဲဖွဈဖွဈ ဝငျရောကျကူညီအကွံပေးကွဖို့ ဖိတျချေါလိုကျရပါတယျ။
Facebook လူမှုကှနျရကျပျေါတှငျတငျဆကျနသေညျ့ စာမကျြနှာမြားတှငျ အခရာမှတငျဆကျထားသညျ့ ဆောငျးပါးမြား၊ သတငျးမြားကို ခှငျ့ပွုခကျြ တဈစုံတဈရာ ရယူထားခွငျးမရှိဘဲ အခရာမီဒီယာမှတငျဆကျနသေညျ့ အကွောငျးအရာမြားထဲမှ စာသားအခြို့ကိုဖွဈစေ ၊ အပုဒျလိုကျဖွဈစေ ၊ တဈပိုဒျခွငျးဖွဈစေ ကူးယူသုံးစှဲခွငျးမပွုရနျနှငျ့ ဆကျလကျပွုလုပျပါက အမြားသိစရေနျကွညောသှားမညျဖွဈပွီး ဥပဒအေရ အရေးယူမညျဖွဈကွောငျး သတိပေးကွညောအပျပါသညျ။